Dowladda Maraykanka Oo Shaacisay In Ciidamo Soomaaliya U Dirtay Eretereeya (Eritrea) Ay Gudaha Galeen Dalka Itoobiya (Ethiopia) – Great Banaadir
WASHINGTON – Ciidamo ay Soomaaliya u dirtay Eretereeya (Eritrea) ayaa Gudaha u galay Dalka Itoobiya, sida uu sheegay Robert F. Godec, oo ah Sii-hayaha Ku xigeenka Xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka.
Robert F. Godec, ayaa Hadalkaan sheegay kadib markii Ilhaan Cumar, oo katirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka ay weydiisay waxa ka jira Ku-lug Lahaanshaha la sheegay in Ciidamo Soomaali ah ay ka qeyb galeen Dagaalka Tigray.
“Waxaan rumeys nahay inay Ciidamadaas ay yihiin kuwo Soomaaliya ay Tababar ugu dirtay Eretereeya (Eritrea) kadib heshiis dhexmaray labada dowladood” ayuu yiri Robert F. Godec.
Warbixin dhowaan ka soo baxday Hay’adda Xuquuqda Addanaha u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in Ciidamo ka socday Soomaaliya oo Tababar ku qaadanayay Eretereeya (Eritrea) ay ka qeyb qaateen Dagaalka Waqooyiga Itoobiya.
Dowladda Soomaliya ayaa Bishii Janaayo (January) beenisay in Ciidamo Soomaali ah oo Tababar u joogay Eretereeya (Eritrea) ay ka qeyb qaateen Dagaalkii ka dhacay Tigray.
Sidoo kale, dhawaan Maamul Goboleedka Puntland ayaa soo bandhigay Dhalinyaro lagu sheegay in ay ahaayeem kuwii loo qaaday Dalka Eretereeya (Eritrea) ee kasoo baxsaday Xeryaha lagu tababarayay, kadib markii ay sheegeen in ay Dhibaato kala kulmeen Ciidamada Eretereeya (Eritrea).